Saraakiil iyo Saraakiil xigeeno cusub oo tababar loogu soo xiray Turkisom+Sawirro – Bandhiga
Saraakiil iyo Saraakiil xigeeno cusub oo tababar loogu soo xiray Turkisom+Sawirro
Ciidan isugu jira Saraakiil iyo Saraakiil xigeeno oo Muddo hal sano ah tababar ku qaatay gudaha Dugsiga tababarka Turkisom ee magaaladda Muqdisho ayaa maanta tabarka loo soo xiray.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga XFS Mudane Xasan Cali Maxamed iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka S/gaas Daahir Aadan Cilmi ayaa goobjoog ka ahaa xafladda dhaarinta ciidankaasi oo kamid noqonaya ciidamada xoogga dalka.
dawladda Turkey ee Soomaaliya, Wakiilo ka socday Ciidanka Xoogga Turkiga, Saraakiil iyo Madax ka socday Wadamada Caalamka iyo qaar kamid ah Ehelada Ciidanka maanta tababarka loo xiray ayaa manaasabadda dhaarinta ku sugnaa.
Taliyaha Dugsiga tababarka ciidanka ee TurkSom S/guuto Cumar Faaruuq oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in saraakiishaan maanta la dhaariyey ay isugu jiraan Ciidamada Cirka, Badda iyo Dhulka, waxaana uu xusay in ay qaateen tababaro kala duwan oo heer sare ah.
Daahir Aadan Cilmi indhaqarshe Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo Munaasabadda sidoo kale ka hadlay ayaa ugu horeyn u hambalyeeyey Saraakiisha cusub ee tababarka loo xiray, waxaana uu tilmaamay in ciidanka xoogga dalka uu dhismayo, isla markaasna hadda uu ku jiro ciribtirka Al-shabaab.
Ugu dambeyntii Wasiirka Wasaaradda Gaashandhigga Xukuumada federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Maxamed ayaa uga mahad celiyay dawladda Turkiga sida ay uga qeyb qaadaneyso dhismaha iyo qalabeynta Ciidanka Xoogga dalka.